वर्षादले विजोग ! - Nayabulanda.com
वर्षादले विजोग !
युद्धबहादुर बोहोरा ११ आश्विन २०७६, शनिबार २०:०७ 164 पटक हेरिएको
घुर्बिसे पञ्‍चमी : दशैंको लागि सामान लिएर आएका ट्रकहरु अविरल वर्षातले गर्दा घुर्बिसे पञ्चमीमा थन्किएका छन् । ल्याइएको सामानहरु अनलोड गर्न समेत पाएका छैनन् । मौसम सुधार नभएसम्म फर्किन असम्भव भन्दै चालकहरु चिन्तित छन् । घुर्बिसे पञ्चमी-राँके सडकको अवस्था विकराल बनेको छ ।